Benefit & Fine
Partnership Inquiry : info@starfishmyanmar.com
Setting | Login | English
English ျမန္မာ (Zawgyi) မြန်မာ (Unicode) 中文
Apex Terminal Wholesale
Door to Door Service (Yangon Area)
Petrol Stations Retail Sales
Fuel Quality Information
USD Earning Trading
Starfish Zay Shop Portal
Starfish Zay Delivery Portal
Fuel Delivery Portal
Borrowing DDPC Microfinance
Petrol Stations Wholesale
အောက်ပါ ခံစားခွင့် နှင့် ပေးရန်တာဝန်များ ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည့် 23-07-2020 နေ့မှ စတင်သက်ရောက်မည် ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များအား အစားထိုး ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ခြင်းများရှိပါက Effective Date နှင့် တကွ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ကြေညာထားရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁.၁ လူကြီးမင်းတို့ Starfish Application အား အသုံးပြု၍ စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူခြင်း နှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်အနေဖြင့် Point များ ပြန်လည် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
၁.၂ လူကြီးမင်းတို့ စုဆောင်းရရှိထားသည့် Point များကို အသုံးပြုပြီးတော့ စက်သုံးဆီပြန်ဝယ်လျှင်လည်း ၁၀% Discount ထပ်ဆောင်းရရှိပါမည်။
၁.၃ လူကြီးမင်းတို့ စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ရရှိလာမည့် Point 1 Point သည် 1 ကျပ် နှင့် ညီမျှပါသည်။
၁.၄ ထို့အပြင် ကြိုသွင်းထားသည့် Deposit များ၏ လက်ကျန် Deposit ငွေအပေါ်တွင် Point များ နေ့စဉ်အလိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်လည်ရရှိပါမည်။
၁.၅ လူကြီးမင်းတို့ စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူရန်အတွက် ကြိုတင်ပေးထားသည့် ငွေ နှင့် စက်သုံးဆီဖိုးပေးချေပြီး ကျန်ရှိသည့် Deposit Balance အပေါ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း Point ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
Deposit Point Reward ရရှိမည့် ခံစားခွင့် များမှာ Deposit Balance ကျပ် 5,000 မှ ကျပ် 99,999 အထိ မိမိ Account တွင် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 20 Point နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
Deposit Point Reward ရရှိမည့် ခံစားခွင့် များမှာ Deposit Balance ကျပ် 100,000 မှ ကျပ် 49,999,999 အထိ မိမိ Account တွင် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 22 Point နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
Deposit Point Reward ရရှိမည့် ခံစားခွင့် များမှာ Deposit Balance ကျပ် 50,000,000 မှ ကျပ် 99,999,999 အထိ မိမိ Account တွင် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 24 Point နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
Deposit Point Reward ရရှိမည့် ခံစားခွင့် များမှာ Deposit Balance ကျပ် 100,000,000 အထက် အထိ မိမိ Account တွင် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 25 Point နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ် ခံစားခွင့် ရရှိပါမည်။
၁.၆ Deposit Reward Point တွက်ချက်ရာတွင် Deposit (ကြိုတင်ငွေ) အဝင် Transaction သည် Reward Point ထည့်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် (16:00 PM) တွင် ၂၄ နာရီ ပြည့်သည့် Transaction များသာ Point ရရှိပါမည်။ (Effective date - 25.03.2021)
၁.၇ ရုံးပိတ်ရက် နှင့် ရုံးပိတ်ရက် မတိုင်ခင် ရှေ့ရက် 12:00 PM နောက်ပိုင်း သွင်းသည့် ကြိုတင်ငွေများအား Point တွက်ချက်ရာတွင် ရုံးပြန်ဖွင့်သည့်ရက် 00:00:01 AM မှစ၍ ၂၄ နာရီ တွက်ချက်ပါမည်။ (Effective date - 25.03.2021)
မှတ်ချက် - ၂၄ နာရီ တွက်ချက်ရာတွင် ရုံးပိတ်ရက် နှင့် ရုံးပိတ်ရက် မတိုင်ခင် ရှေ့ရက် 12:00 PM နောက်ပိုင်း အား ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည် မဟုတ်ပါ။ (Effective date - 25.03.2021)
၂.၁ Cash Down (postpaid) နှင့် Credit ဝယ်ယူခွင့် ရရှိထားသည့် Customer များသည် မိမိ ဝယ်ယူသည့် အမှာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်အတွင်း ငွေပေးချေခြင်းမရှိပါက နောက်ကျရက်လွန်ကြေးများကို Starfish Application မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းအတိုင်း လက်ခံပေးချေရပါမည်။
၂.၂ Due Fine နှုန်းထားများ (တစ်ရက်နှုန်းထား)
စက်သုံးဆီဖိုး ပေးရန် သတ်မှတ်ရက် ကျော်လျှင် ကျော်လွန်ပြီး First Week အတွက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 5,000 အထက် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 40 ကျပ်နုန်းဖြင့် Fine ကောက်ပါမည်။ မှတ်ချက် - အများသူငှာ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တွက်ချက်ပါမည်။
စက်သုံးဆီဖိုး ပေးရန် သတ်မှတ်ရက် ကျော်လျှင် ကျော်လွန်ပြီး Second Week အတွက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 5,000 အထက် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 50 ကျပ်နုန်းဖြင့် Fine ကောက်ပါမည်။ မှတ်ချက် - အများသူငှာ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တွက်ချက်ပါမည်။
စက်သုံးဆီဖိုး ပေးရန် သတ်မှတ်ရက် ကျော်လျှင် ကျော်လွန်ပြီး Third Week အတွက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 5,000 အထက် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 100 ကျပ်နုန်းဖြင့် Fine ကောက်ပါမည်။ မှတ်ချက် - အများသူငှာ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တွက်ချက်ပါမည်။
စက်သုံးဆီဖိုး ပေးရန် သတ်မှတ်ရက် ကျော်လျှင် ကျော်လွန်ပြီး Third Week Above အတွက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 5,000 အထက် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 100 ကျပ်နုန်းဖြင့် Fine ကောက်ပါမည်။ မှတ်ချက် - အများသူငှာ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တွက်ချက်ပါမည်။
စက်သုံးဆီဖိုး ပေးရန် သတ်မှတ်ရက် ကျော်လျှင် ကျော်လွန်ပြီး One Years Above အတွက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 5,000 အထက် ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 100 ကျပ်နုန်းဖြင့် Fine ကောက်ပါမည်။ မှတ်ချက် - အများသူငှာ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တွက်ချက်ပါမည်။
စက်သုံးဆီဖိုး ပေးရန် သတ်မှတ်ရက် ကျော်လျှင် ကျော်လွန်ပြီး Third Week Above အတွက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ် 500 မှ ကျပ် 4,999 ကျန်ရှိလျှင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှင် 100 ကျပ်နုန်းဖြင့် Fine ကောက်ပါမည်။ မှတ်ချက် - အများသူငှာ ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တွက်ချက်ပါမည်။
Head Office : No(51), Room(1003), 10 floor, Shwehinthar Tower(A), Pyay Street, Hlaing Tsp, Yangon.
If you would like to get other services, please send SERVICE REQUEST.
Get It FromAppstore Get It FromPlaystore
Copyright © 2019 - 2022. All rights reserved by Starfish Myanmar. Powered By Starfish Myanmar.